Yini izimbobo ezimnyama futhi zakheka kanjani? Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kuyiqiniso ukuthi uma ukhuluma ngomkhathi nemithala uzwile nge izimbobo ezimnyama. Bayesatshwa kakhulu futhi kucatshangwa ukuthi bayakwazi ukugwinya noma yini ebangena ekuhlakazekeni. Namuhla sizokhuluma ngalezi zinto zomhlaba nokubaluleka noma ingozi abanayo. Uzokwazi ukwazi ukuthi ziyini izimbobo ezimnyama, zakhiwa kanjani futhi ezinye izifiso zazo.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngakho, lokhu okuthunyelwe kwakho 🙂
1 Yini izimbobo ezimnyama
2 Izici zemigodi emnyama
3 Amandla omgodi omnyama
Yini izimbobo ezimnyama
Le mibobo emnyama ayilutho ngaphandle kwezinsalela zezinkanyezi zasendulo ezingasekho. Izinkanyezi ngokuvamile zinenani eliminyene lezinto nezinhlayiya, ngakho-ke, zinamandla amakhulu adonsela phansi. Kumele ubone nje ukuthi iLanga likwazi kanjani ukuba namaplanethi ayi-8 nezinye izinkanyezi ezizungezile ngendlela eqhubekayo. Ngenxa yesisindo seLanga yingakho Uhlelo lomkhathi. Umhlaba uhehwa yiwo, kepha akusho ukuthi sisondela kakhulu kwiLanga.
Izinkanyezi eziningi ziqeda izimpilo zazo njengezinkanyezi ezimhlophe noma izinkanyezi ze-neutron. Izimbobo ezimnyama ziyisigaba sokugcina ekuguqukeni kwalezi zinkanyezi ezazinkulu kakhulu kuneLanga. Yize iLanga kucatshangwa ukuthi likhulu, kuseseyinkanyezi emaphakathi (noma incane uma siliqhathanisa nezinye). . Le ndlela inezinkanyezi eziphindwe kayishumi nakayi-10 ubukhulu beLanga okuthi uma ziphela ukuba khona zenze umgodi omnyama.
Njengoba lezi zinkanyezi ezinkulu zifinyelela ekupheleni kwezimpilo zazo, ziyaqhuma enhlekeleleni enkulu esiyazi njenge-supernova. Kulokhu kuqhuma, inkanyezi eningi ihlakazeka emkhathini futhi izingcezu zayo zizulazula emkhathini isikhathi eside. Akuzona zonke izinkanyezi eziqhumayo nezisakazekayo. Okunye okuhlala "kubanda" yilokho okungancibiliki.
Lapho inkanyezi isencane, i-fusion yenuzi idala amandla nengcindezi engapheli ngenxa yamandla adonsela phansi angaphandle. Le ngcindezi namandla eyakhayo yikho okukugcina ukulingana. Amandla adonsela phansi adalwa ubukhulu benkanyezi uqobo. Ngakolunye uhlangothi, kuzinsalela ze-inert ezisele ngemuva kwe-supernova akukho mandla angamelana nokuheha kwamandla ayo, ngakho-ke okusele kwenkanyezi kuqala ukuziphindisela emuva. Lokhu kwenziwa yimigodi emnyama.
Izici zemigodi emnyama
Ngaphandle kwanoma yimaphi amandla akwazi ukumisa isenzo samandla adonsela phansi, kuvela imbobo emnyama ekwaziyo ukuncipha yonke indawo bese iyicindezela ize ifinyelele ku-zero volume. Ngalesi sikhathi, ukuminyana kungathiwa akupheli. Lokho kusho ukuthi, inani lodaba olungaba kulelo volthi zero alinamkhawulo. Ngakho-ke, ubukhulu balelo phuzu elimnyama alinamkhawulo futhi. Akukho okungabalekela amandla anjalo okuheha.
Kulokhu, ngisho nokukhanya inkanyezi ebinakho akukwazi ukweqa amandla adonsela phansi futhi kubhajwe ngumjikelezo ngokwawo. Ngalesi sizathu ibizwa ngokuthi imbobo emnyama, ngoba ngisho nokukhanya akukwazi ukukhanya kule volumu yobuningi obungapheli namandla adonsela phansi.
Yize amandla adonsela phansi engenamkhawulo kuphela lapho kungafika eqophelweni le-zero lapho isikhala sizigoqela khona, le migodi emnyama idonsa udaba namandla komunye nomunye. Noma kunjalo, ungesabi selokhu amandla eziheha ngawo ezinye izidumbu awekho amakhulu kunanoma iyiphi inkanyezi noma into yomhlaba yonke enye impahla yendawo yonke.
Ngamanye amagama, umgodi omnyama olingana neLanga lethu awukwazanga ukusidonsela kuwo ngamandla amakhulu kuneLanga uqobo lwalo. Umgodi omnyama olingana neLanga ungaba maphakathi neSolar System uMhlaba obuzowujikeleza ngendlela efanayo. Empeleni, kuyaziwa ukuthi isikhungo seMilky Way (umthala lapho sikhona) sakhiwe umgodi omnyama.
Amandla omgodi omnyama
Yize bekulokhu kucatshangwa ukuthi imbobo emnyama idonsela kuyo yonke into ezungeze yona futhi iyigubuzele, akunjalo. Ukuze amaplanethi, ukukhanya, nezinye izinto kugwinywe umgodi omnyama, kufanele kudlule kusondele kakhulu kuwo ukuze ukhangwe enkabeni yawo yokusebenza. Lapho iphuzu lokungabuyi selifinyelelwe, Ufake umkhathizwe womcimbi, lapho kungenakwenzeka khona ukubaleka.
Futhi ukuthi sikwazi ukuhamba lapho isiphetho somcimbi sesifakiwe, kuzofanele sikwazi ukuhamba ngejubane elikhulu kunalelo okuhamba ngalo ukukhanya. Izimbobo ezimnyama zincane kakhulu ngosayizi. Imbobo emnyama efana naleyo etholakala maphakathi neminye imithala, ingaba nendawo engaba amakhilomitha ayizigidi ezintathu. Lokhu kucishe kube ngaphansi kwamalanga ama-3 afana nelethu.
Uma imbobo emnyama ibinesisindo seLanga lethu, ibingaba nobubanzi obungamakhilomitha ama-3 kuphela. Njengenjwayelo, lobu bukhulu bungangethusa kakhulu, kepha konke endaweni yonke kunjalo.
Njengoba sincane ngosayizi futhi simnyama, asikwazi ukuwabona ngqo. Ngenxa yalokhu, sekuyisikhathi eside ososayensi bekungabaza ukuba khona kwayo. Into eyaziwa ukuthi ikhona kepha lokho akubonakali ngqo. Ukuze ubone umgodi omnyama, kufanele ulinganise ubukhulu bendawo yesikhala bese ubheka izindawo lapho kunenani elikhulu lobunzima obumnyama.
Izimbobo eziningi ezimnyama zitholakala ngaphakathi kwezinhlelo kanambambili. Lokhu kudonsela inani elikhulu lobukhulu benkanyezi abanayo eduze kwabo. Njengoba lesi sisindo siheha, ziya ngokuya zikhula. Kufika isikhathi lapho inkanyezi ehambisana nayo okhipha kuyo inyamalala ngokuphelele.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyasiza ukuqonda kabanzi ngemigodi emnyama.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Izimbobo ezimnyama